IiArches kwimbali yaseMontgomery, ePowys.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJudith
I-Arches yindawo epholileyo, yangoku evalelweyo imizuzu emihlanu ukusuka kumbindi wedolophu yaseMontgomery eyimbali.
Sixhotyiselwe ngokupheleleyo indawo yokuphumla yosapho, sikwabonelela ngebhedi yokuhamba, isitulo esikhulu, ibhafu yomntwana kunye nemethi yokutshintsha. Kukho imidlalo yabantwana, iithoyi, iiphazili, neencwadi kunye neeDVD zosapho lonke.
IiArches yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola iBorder emangalisayo yelizwe ngendlela, ngeenyawo okanye ngebhayisekile, kwaye ifikeleleka lula kunxweme oluhle lwaseMid-Wales.
Ngesicelo siya kubonelela ngesithintelo esamkelekileyo sezibonelelo eziyimfuneko, kubandakanya ubisi kunye nesonka.
4.96 ·Izimvo eziyi-56
Ime kwindawo yolondolozo lwedolophu, i-Arches ikumgama wokuhamba weMontgomery Castle, iSt Nicholas' Church eWales kunye neziko leMonty's Brewery. Igrosari yakwaSpar, iGalari encinci, iBunner's Emporium, i-Ivy House cafe, iCheckers Pantry kunye neThe Dragon Hotel eneBistro zonke zikwimbindi yedolophu, imizuzu emi-5 uhambe.
Idolophu yentengiso yaseWelshpool ikumgama oziikhilomitha ezisi-7, kunye neNewtown kumgama ofanayo kwelinye icala. Ime kumda wesiNgesi/waseWales, iMontgomery yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga ubuhle beWelsh Marches.
Umbuki zindwendwe ngu- Judith
Siza kushiya iinkcukacha zendlela onokuthi uqhagamshelane nathi ngayo kunye 'nokuthi yintoni eyenzekayo' kwindawo yendawo kwipakethi yakho yokwamkela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Powys